To ga-amata nke igwe ogologo igwe eletriki dị? | ebike Shuangye
Mbido blog News To ga-amata nke igwe ogologo igwe eletriki dị?
Datebọchị ： 2020-07-03 Categories ：News Nlele ： 2,148
Ọ bụrụ na ndị ahịa gị na-eche oge kacha ogologo njem ha nwere ike ịga na ụgwọ sigle, maịl nwere ike bụrụ ihe na-ekpebi ndị ahịa gị ịzụta. Otu esi amata nke e-bike bu igwe kwụ otu ebe. Ogologo oge ha ga-agba ịnyịnya igwe eletriki n'otu ụgwọ, belụsọ na ha echeghị iji aka na-agagharị n'ụlọ n'ihi na batrị ahụ kwụsịrị tupu njem ahụ agwụ. Mana njem dị mfe anaghị agbakọ, yabụ ebike ọ bụla ga-enwe ule ma ọ bụ nyocha, mana o nwere ike ọ gaghị abụ eziokwu. Ọ kachasị kama ịnwale ule e-igwe na-ejikarị n'ọnọdụ ndị ọzọ a na-achịkwa achịkwa - paịlị larịị na-enweghị mgbochi, ihu igwe mara mma, wdg.
N'ezie, ọ bụghị igwe eletriki igwe eletrik ọ bụla na-atụle ịnya ịnyịnya nke e-igwe kwụ otu ebe. N'ikwu okwu n'ozuzu, a na-ekpebisi ike njem njem nke igwe eletriki igwe ogologo site nha na ike nke batrị eletriki na moto.
Mana enwere ihe ga - ekpebi igwe kwụ otu ebe, gụnyere: ịdị arọ nke onye na-agba gị, teren (ụzọ dị larịị na ugwu nta), ọtụtụ ihe ị na - ebu, ọnọdụ ikuku, ọkwa enyere aka, ikike batrị, ike moto na na na. Ọ bụrụ na njem njem e-bike bụ ihe dị mkpa, ị kwesịrị ịghọta otú ọkwa enyemaka aka na ikike batrị si emetụta mpaghara ị nwere ike ịga na otu ụgwọ batrị.
Enyemaka nke Enyemaka Pedal
Ogologo igwe eletriki igwe elektrik ga-ekewa na ọnọdụ nke enyemaka pedal na ọnọdụ inyeaka.
A na-enye aka na ọnọdụ enyemaka Pedal mgbe a na-azọtọ pedals. Yabụ ị nwere ike iji pedelec dịka igwe ọdịnala na-enweghị ike, ma ọ bụ nwee igwe kwụ otu ebe na-enye ndị batrị ike. Electric igwe kwụ otu ebe ọrụ mgbe usoro na-agụ ọnụego ị na-pedaling. Ọsọ ọsọsọ ị ga-agbagharị, ngwa ngwa moto ahụ na-agafe. Ka ike karie, ka ike moto na-enye. Anyike nwere usoro iyi egwu di nfe karie n’elu ugwu n’ihi na inweta ike mgbe ichoro kariri ya, n’agbanyeghi na onu ahia gi di ala karie ma oburu n’iru ala. N'ozuzu, enwere ọkwa 3 ma ọ bụ 5 nke enyemaka pedal na igwe kwụ otu ebe dị ogologo. Dịka ọmụmaatụ, igwe eletriki eletriki eletrik Shuangye nwere 6 enyemaka nke pedal, enwere ike ịhọrọ ọkwa 0 ruo ise ka ọkwa ọ bụla.
Ọnọdụ igwe kwụ otu ebe na-apụta na igwe kwụ otu ebe eletriki dị ogologo na-agbasa n'ihu mgbe onye na-agba igwe na-pịa bọtịnụ, pịa onye na-ejide ya (ma ọ bụ ihie), ma ọ bụ na-agbanye aka. A na-etinyekarị akpukpo ahụ na aka nke ebike ma jikọta ya na sistemụ eletriki na-ejikwa ọsọ nke ebike. Ọ bụrụ na onye ahụ na-agba ya na -ekwu ihe na -eme ya, ọ na-eme ngwa ngwa. Shuagnye ebike jiri mkpịsị aka ukwu, nke dabara adaba maka biker.
Na mkpokọta, enyemaka nke pedal nwere ogologo ogologo karịa karịa onye na-enyere ibeke aka aka.
Ike nke batrị
Batrị na-enye moto ahụ ike, nke na-eme ka wiil ndị ahụ tụgharịa. Ọtụtụ igwe kwụ otu ebe dị ogologo ga-ahọrọ batrị lithium dị ka ịnye ọkụ, nke bụ batrị kachasị dị na ahịa taa. Ọ bụkwa ụdị batrị kachasị adaba iji nyere aka ogologo ị nwere ike ịga njem n'otu ụgwọ. Ka ịdị elu karịa, ike batrị nwere ike ịchekwa ya, ị ga-enwe ike ịnya igwe elele. N'iji ya na ụdị batrị ndị ọzọ, batrị lithium-ion nwere ikike ume ọrụ ka ukwuu.
To ga-amata ike batrị nwere ike ime ka igwe kwụ ọtọ na-aga n'ihu. N'ezie, ọkụ eletrik dị elu na Amp-hrs pụtara na ụgwọ niile echekwara na batrị.
Ihe ọzọ na-esote ịtụle bụ ikike batrị. Ike batrị gbakọtara dị ka Watt-awa, nke bụ nha nke ụgwọ zuru ezu echekwara na batrị. 36 volt na 48 volt batrị na-ahụkarị n'ahịa, enwerekwa batrị 60 volt iji zute mkpa onye ahịa gị na igwe eletrik Shuangye. Ma enwekwara ikike batrị dị ukwuu maka batrị 48 volt ịhọrọ, dị ka 10ah-30ah maka ike dị iche iche na igwe eletriki igwe dị iche iche.
Ihe abụọ a dị mkpa iji metụta igwe kwụ otu ebe. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere igwe igwe eletriki igwe ogologo, ị nwere ike ịgagharị ederede gara aga ma ọ bụ gaa na Ụlọ Ọrụ Weebụ, nwekwara ike ịhapụ ozi gị n'okpuru.
Tags:ogologo igwe eletriki enyemaka eletriki igwe eletriki aka
Mbụ: Shuangye zutere gị na 127th Canton Fair 2020
Next: Etu esi edobe batrị igwe eletrik